Rooble oo la kulmay danjire ay dowladdiisa iyo Farmaajo is qabteen | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo la kulmay danjire ay dowladdiisa iyo Farmaajo is qabteen
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay danjire ka socda dal ay is qabteen madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku aabilay Danjiraha Dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Maxamed Axmed Alcuthman, iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo kaalinta Dowladda Imaaraadka ee gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha Hirshabeelle.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa mugdi ku jiray wixii ka dambeeyay markii Dowladda Soomaaliya horaantii sanadkii 2018 xayirtay diyaarad ka timid Imaaraadka oo siday lacag gaareysa sagaal milyan, iyadoo dowladduna lacagtaas la wareegtay. Imaaraadka ayaa ka dalbatay dowladda Soomaaliya inay raalli gelin ka bixiso tallaabada lagu xanibay diblomaasiyiinteeda, iyadoo aanay dowladdu wax cudur daar ah ka bixin.
Safiirka Maxamed Al-cuthmaan ayaa joogitaankiisa Muqdisho aad u koobnaa saddexdii sano ee xiriirla labada dal mugdiga ku jiray, iyadoo Nairobi inta badan fadhi u aheyd, halka xilliyo qaar Muqdisho imaan jiray.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa dagaal toosa ku qaaday Imaaraatka Carabta isagoo ku daray liiska waddamada dibindaabyada ku haya Soomaaliya ee horumarka u diiday, iyadoo la xiray xarun ay ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya ku tababari jirtay!